Ingxowa yokugcina inqwelo-moya - 21 Iinyawo ezingama-21 zeenyawo ze-cubize proboof hard yengxowa ye-CB005-21 | Zone
Ibhegi ye-Ballproof ye-Waterproof
iblowu, orenji, etyheli okanye ngokwezifiso
I-1.100% yamanzi-: I-Cargo yeCarriers yeCarriers yenziwa ngendwangu ye-PVC ye-PVC enamanzi amaninzi, i-velproof yemvula ephindwe kabini, yonke le misebenzi inikezela ngokukhuselekileyo, I-100% yamanzi kunye nemvula iphantsi kwemozulu egqithisileyo.
Uloyilo olusemgangathweni we-2.ight-Oppel PVC-i-500D ye-PVC, i-Elaistity elungileyo, ilula ukubuyisela i-crease emva kokusongelwa, kwaye akukho lula ukuyifaka. I-teers eguqukayo, i-mats yasimahla, izithuthi zinokukhusela eluphahleni lwemoto kunye nophahla lophahla, ngaphandle kwendlela. Intambo eyongezelelekileyo yomlingo iqinisekisa ukukrala iwindow.
3.easy ukufaka: Ibhanti yokulungisa umntu, kunika ibhulukwane, ekulula ukuyisebenzisa kwaye kulula ukusebenza. Ngaphambi kokusebenzisa i-cargo yemoto yemoto, faka ipad engeyiyo eluphahleni eluphahleni lwemoto, olunokwenza ukuqhuba ukhuselekile. Nge-Hook yecango kwikhithi, inqwelo moya yemoto ephezulu ye-carriers inokufakwa kuyo nayiphi na imoto.
4.Ukugcinwa kogcino: Ingxowa yophahla lwemoto yemoto yenzelwe ukusombulula ukunqongophala kwendawo yokugcina emotweni. Iingxowa ezi-21 zeenyawo ze-Cubize Iibhegi zeTuic Arriers zinokubamba iisutikheyisi, iisutikheyisi, iintente, iingxowa zokulala, iingxowa zesikolo njalo njalo. Dibana nazo zonke iimfuno zokuhamba.
5.FIT nayiphi na iimoto: Ibhegi ephezulu yemoto ingekasetyenziswa okanye ngaphandle kwe-racks yophahla okanye ibhokisi yecala lendlela ye-Dounds kunye ne-hids ye-cargo ye-4, ukuze ibhegi yemoto yemoto isetyenziswa kwizithuthi ezahlukeneyo, kubandakanya nayiphi na imoto, i-MPV okanye iSUV.